२०७७ असार ३० मंगलबार ०४:१०:००
त्रेतायुगका राम ठोरीको अयोध्यापुरीमा जन्मिएका हुन् कि उत्तरप्रदेशको अयोध्यामा ? योभन्दा ठूलो प्रश्न अतिक्रमित ७१ ठाउँका जनतालाई कसरी भारतीय फौजको प्रताडनाबाट मुक्त गराउने भन्ने हो । चितवनको अयोध्यापुरीसँगै जोडिएको पारि नवलपरासीको सुस्ताका जनता आफ्नो खेतीसमेत भारतीयले जोतिरहेको टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् ।
अयोध्यापुरीपारि सुस्ताका ओमप्रसाद चौधरी भन्छन्– आफ्नै खेतमा जान पाउँदिनँ, टाढैबाट हेरेर फर्कन्छु
एकैठाउँमा १५ जनाको ५७ बिघा जमिन छ । लालपुर्जा हामीसँगै छ, तर आफ्नै खेतमा जान पाउँदैनौँ । नम्बरी जग्गा हो, अहिले चौर भएको छ । कुनै दिन त्यो भूमि हाम्रै होला भन्ने आशा छ । नजिक जान त सक्दिनँ, टाढैबाट हेरेर फर्कन्छु ।
बेचेनी यादव भन्छिन्– नेपाली होस् भने नागरिकता देखा भन्छन्, हामीसँग छैन
नारायणीपारि सुस्तामा तीन हजार नेपालीको बसोवास छ, तर धेरैसँग लालपुर्जा छैन, जोसँग लालपुर्जा छ तिनको जमिनमा भारतीयले खेती गर्छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीको आडमा सीमापारिका बासिन्दाले नेपालीलाई त्रासमा राखेका छन्, कहिले कुटपिट गर्छन्, कहिले घरमै आगो लगाइदिन्छन् । भारतबाट प्रताडित र नेपालबाट उपेक्षित सुस्ताको जीवन सधैँ आपतविपतमा छ ।
भारतीयले धकेल्दै ल्याउँदा वास्तविक सिमानाबाट १७ किलोमिटर माथिसम्म ल्याएका छन् । ‘अहिले त सीमास्तम्भ नै छैन, जंगेपिलर छैन, देशको सिमाना हो, तर कुनै हिसाब–किताब नै छैन,’ गुरुङ भन्छन् । सुस्तामा नेपालको वास्तविक भूमि ४० हजार नौ सय ८० हेक्टर हो । १४ हजार हेक्टर भूमि भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन् भने नेपालसँग औपचारिक रूपमा सात हजार हेक्टर मात्रै बाँकी छ । बाँकी १९ हजार नौ सय ८० हेक्टर जमिनलाई विवादित क्षेत्र भनिएको छ । अतिक्रमण अभैm रोकिएको छैन । नारायणी नदीमा भारतीय पक्षले अग्लाअग्ला तटबन्ध र पर्खाल लगाएका छन् । त्यसैले नदीको धार नेपालतर्फ धकेलिँदै छ ।
यसबाहेक मोरङमा बुद्धनगर–जोगबनी, रंगेली–चोप्राहा, रानी, बक्राहा नदी–चुनिमाडीमा समस्या छ । उता प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला झापाका पाठामारी, मेचीगाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर–गलगलिया, काँकडभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी तथा इलामका चित्रेडाँडा, पशुपतिनगर, झिझिया भन्ज्याङ, मानेभन्ज्याङबाट सन्दकपुर जाने बाटो, मानेभन्ज्याङ, सन्दकपुर र जौबारी डाँडामा सीमाविवाद छ । कालपोखरी, च्याङथापु, फालेलुङ, ताप्लेजुङ सीमा क्षेत्रका डाँडो चिवाभन्ज्याङ, टिम्बापोखरी, मेगना र तुम्लिङमा पनि सीमाविवाद छ ।
प्रधानमन्त्रीले जन्माए नयाँ वहस : अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो
रामजन्मभूमिको विषयमा भारतमा सात सय वर्षदेखि चलेको विवाद त्यहाँको सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेको सात महिनापछि नयाँ बहस सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रामको जन्मभूमि भारत उत्तरप्रदेशको अयोध्या होइन, वीरगन्जनजिकैको अयोध्यापुरी भएको दाबी गरेका छन् ।
‘हामी अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ, मिचिएका छौँ, तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ । हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ । तर, भारतलाई होइन, अयोध्यालाई दियौँ । अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो,’ भानुजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले सोमबार बालुवाटारमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले भने ।
ओलीले उत्तरप्रदेशको अयोध्यामै राम जन्मिएको भए उनको बिहे जनकपुरकी सीतासँग सम्भव नहुने पनि दाबी गरे । ‘यहाँको जनकपुर, उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोज्या, कहाँ के छ । त्यसवेलाको जमानामा न टेलिफोन, न मोबाइल । कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सक्दैनथ्यो । नजिकै भए सजिलैसँग कुरा हुन्थ्यो, तर यो इतिहास बहस गरिसाध्य छैन ।’
प्रधानमन्त्रीले भनेको अयोध्यापुरी चितवनको माडी नगरपालिकाको वडा नं. ८ मा पर्छ । तर, सो क्षेत्रमा वाल्मीकिको आश्रम भए पनि राम नै जन्मिएको भन्ने आफूहरूले अहिले मात्र सुनेको बताउँछन् नगरपालिका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकाल । ‘पहिले त अयोध्यापुरीको नामबाट गाविस नै थियो । अहिले माडीको वडा नं. ८ मा छ । तर, यो नै रामजन्मभूमि हो भनेर अहिलेसम्म व्याख्या भएको सुनिएको छैन, त्यस्तो अध्ययन भएको छैन । त्यस्ता कुनै भग्नावशेष पनि छैनन् । तर, सरकारले अध्ययन गर्नु राम्रो हो,’ ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
माडीको वडा नं. १ मा वाल्मीकि आश्रम छ । वाल्मीकिले यहीँ बसेर रामायण लेखेको भन्ने मान्यता छ । मेयर ढकाल भन्छन्, ‘वाल्मीकि आश्रमलाई सबैले मानेका छन् । वाल्मीकिसँग सम्बन्धित विभिन्न आधार पनि यहाँ छन् । त्यसैले हरेक दिन दुई–चार सय यात्रु यहाँ आउँछन् ।’
उता वाल्मीकि आश्रमस्थित हरिहर मन्दिरका पुजारी रामशरण गिरी पनि अयोध्यापुरी नै रामजन्मभूमि हो भने सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘वाल्मीकिले यही क्षेत्रमा तपस्या गर्नुभएको हो, यहीँ बसेर रामायणको रचना गर्नुभएको हो । देशको प्रधानमन्त्रीले रामजन्मभूमि पनि यही हो भनेपछि केही आधार होला । सरकारले अध्ययन–अनुसन्धान गरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ,’ गिरी भन्छन् ।
तर, वाल्मीकि आश्रम नै सरकारी उपेक्षामा परेकोमा उनको गुनासो छ । ‘वाल्मीकि आश्रम भनेर टाढा–टाढाबाट साधुसन्त आउँछन् । तर, यहाँ एउटा शौचालय पनि छैन । साधुसन्त बस्ने ठाउँ छैन । पुजारी नै बस्ने ठाउँ छैन भने साधुसन्त कहाँ बस्ने ? हामी आफैँ पनि सुकुम्बासी बस्तीमा बसेका छौँ । तर, साधुसन्तलाई भोकै राख्दा पाप लाग्दा भनेर हामी आफैँले व्यवस्था गर्दै आएका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राम, सीता, वाल्मीकि र अयोध्याको विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएँ, कृृपया वाल्मीकि आश्रमको यो बेहाल सुनाइदिनुहोला । सायद उहाँले सहयोग गर्नुहोला ।’
वाल्मीकि आश्रममा दिनमा सयौँ यात्रु आउँछन्, तर शौचालयसमेत छैन, कृपया प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो सुनाइदिनुहोला : रामशरण गिरी, वाल्मीकि आश्रमस्थित हरिहर मन्दिरको पुजारी
माडीको अयोध्यापुरी क्षेत्रमा वाल्मीकि आश्रम छ । वाल्मीकिले यही क्षेत्रमा तपस्या गर्नुभएको हो, यहीँ बसेर रामायणको रचना गर्नुभएको हो । त्यसैले यहाँ उहाँको आश्रम मात्र होइन, समाधि पनि छ । वाल्मीकिको आश्रम यही हो भन्नेमा विवाद छैन ।
देशको प्रधानमन्त्रीले रामजन्मभूमि पनि यही हो भनेपछि केही आधार होला । सरकारले अध्ययन–अनुसन्धान गरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।
खासमा यो कथा यो युगको होइन, त्रेता युगको हो । त्रेता युगमा नेपाल, भारत, बंगलादेश भनेर देश नै थिएनन् । त्यसैले त्यो वेला यस्तो विवाद हुने कुरा भएन ।
तर, राम जन्मेको ठाउँ उत्तरप्रदेशको अयोध्या र सीता जन्मेको ठाउँ नेपालको जनकपुरमा पर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । त्यसैगरी वाल्मीकिले रामायण लेखेको ठाउँ माडीको अयोध्यापुरी क्षेत्र हो ।
रावणको अपहरणबाट मुक्त भएर अयोध्या फर्किएपछि सीतामाथि समाजले लान्छना लगायो । सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन रामले सीतालाई फेरि वनवास पठाउनुभयो । ल
क्ष्मणले सीतालाई वाल्मीकि आश्रमसम्म ल्याएर छाड्नुभयो भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
वाल्मीकि आश्रममा आउँदा सीता गर्भवती हुनुहुन्थ्यो, आश्रममै उहाँले लव–कुशलाई जन्म दिनुभयो । पछि रामले अश्वमेघ यज्ञ गरेर घोडा छोड्नुभएको थियो ।
त्यो घोडा कसैले समात्न सकेनन्, लव–कुुशले नियन्त्रणमा लिएर वाल्मीकि आश्रममा ल्याए । यहाँ एउटा मौलो छ जहाँ घोडा बाँधिएको थियो भन्ने विश्वास छ ।
घोडा खोज्दै राम आएपछि लव–कुशसँग लडाइँ पनि भयो । तर, वाल्मीकि र सीताले लडाइँ समझदारी गराए । पछि छोराहरूलाई रामको जिम्मा लगाएर सीता पातालमा भासिनुभयो भन्ने कथा रामायणमा छ ।
पछि वाल्मीकिले पनि यहीँ समाधि लिनुभयो । समाधि पनि छ ।
अब राम यही पारिको अयोध्यापुरीबाट आउनुभएको थियो कि उत्तरप्रदेशको अयोध्याबाट भनेर हामी पुजारीले ठेगान लगाउन सक्ने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले ठेगान लगाउनुभयो भने धेरै राम्रो ।
तर, वाल्मीकि आश्रमलाई नै सरकारले किन यति उपेक्षा गरेको होला भन्ने हाम्रो दुःखेसो छ ।
बर्खामा अलिक कम भए पनि हिउँदमा हरेक दिन दुई सयदेखि पाँच सयसम्म यात्रु यो क्षेत्रमा आउँछन् । अनेक साधुसन्त आउँछन् । पूजाआजा हुन्छ ।
तर, सरकारले यो आश्रम सञ्चालन गर्न कुनै सहयोग गरेको छैन । यही आश्रमको मन्दिरमा मेरा बुबाआमाले पूजा गर्नुहुन्थ्यो ।
राजा महेन्द्रले यो जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, राजा वीरेन्द्रको पाला पनि सहयोग थियो । तर, अहिले सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको छ ।
वाल्मीकि आश्रम भनेर टाढाटाढाबाट साधुसन्त आउँछन् । तर, यहाँ एउटा शौचालय पनि छैन । साधुसन्त बस्ने ठाउँ छैन ।
पुजारी नै बस्ने ठाउँ छैन भने साधुसन्त कहाँ बस्ने ? हामी आफैँ पनि सुकुम्बासी बस्तीमा बसेका छौँ ।
तैपनि साधुसन्तलाई भोकै राख्दा पाप लाग्दा भनेर हामी आफैँले व्यवस्था गर्दै आएका छौँ ।
राम, सीता, वाल्मीकि र अयोध्याको विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएँ, कृृपया वाल्मीकि आश्रमको यो बेहाल सुनाइदिनुहोला ।
सायद उहाँले सहयोग गर्नुहोला ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् : हामी अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ, मिचिएका छौँ, तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ । हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ । तर, भारतलाई होइन, अयोध्यालाई दियौँ । अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो । अहिले भीषण विवाद चलिरहेको छ । हाम्रोमा विवाद गर्नुहुँदैन ।
जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगन्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा । वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ र दशरथपट्टि सन्तान नभएपछि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रिडीका पण्डित शृंग ऋषि । पुत्रेष्ठी यज्ञ गर्न । पछि गएर उनी डाँडामा बस्न थाले र अझै पनि त्यहाँ शृंग भन्ने आश्रम छ । त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका होइनन्, ठाउँ पनि भारत हुँदै होइन, ठाउँ पनि नेपालको हो । वाल्मीकि आश्रम त्यहीँ छ र जनकपुर त्यहाँ छ । यहाँको जनकपुर, उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोज्या, कहाँ के छ । त्यसवेलाको जमानामा न टेलिफोन, न मोबाइल । कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सक्दैनथ्यो । नजिकै भए सजिलैसँग कुरा हुन्थ्यो, तर यो इतिहास बहस गरिसाध्य छैन, यो भनेपछि विद्वान्हरूको ...।
तर, अयोध्या यहाँ छँदै छ अहिले पनि र घर–माइती यति छिटोछिटो अयोध्याबाट हुन सक्दैन । जनकपुर र वीरगन्ज भएकाले भयो । त्यहाँबाट वाल्मीकि आश्रम सजिलै पुगिन्थ्यो । पछि सीतालाई अयोध्याबाट ल्याएर रामले वाल्मीकि आश्रममा त्यत्रो दिन छोडेको होइन । जंगलमा छोडदिने भनेको ठाउँमा दुई दिन, चार दिन भए हुन्थ्यो, महिनौँ लाग्छ । लक्ष्मण महिनौँ हराएका होइनन् । खुरुरु पु¥याइदिए, फर्किए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको टिप्पणी
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले टिप्पणी गरेका छन् । डा. भट्टराईले ट्विट गरेका छन्, ‘आधी–कवि ओलीकृत कलीयुगीन नयाँ रामायण श्रवण गरौँ सीधै वैकुण्ठधामको यात्रा गरौँ !’
त्यसैगरी थापाको ट्विट छ, ‘प्रमको स्तरबाट यस्ता उटपट्याङ, अपुष्ट र अप्रमाणित कुरा आउनु सर्वथा उपयुक्त छैन । भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नेभन्दा बिगार्नेतर्फ प्रमको ध्यान गएजस्तो लाग्छ । नक्सा प्रकाशित गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्न छाडेर दुई देशको सम्बन्धमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो होइन ।’
#प्रधानमन्त्री # कलियुग # त्रेतायुग